एनसेलले ल्यायो नयाँ च्याटबोट सेवा ‘माया’ - Narayanionline.com
काठमाडौं माघ ६-
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन योजनाअनुरुप आफ्ना ग्राहकका लागि च्याटबोट सेवा ‘माया’ सुरु गरेको छ । यो च्याट सेवाको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत एनसेलको सेवा तथा सुविधाका बारेमा जानकारी लिन सक्छन ।
च्याटबोट सेवा ‘माया’ एनसेलले आफ्नो नयाँ अभियान ‘फास्ट फरवार्ड लाइफ’अन्तर्गत ल्याएको जनाएको छ । यो अभियानले भविष्यको पुनः कल्पना गर्दै डिजिटल पावरका साथ छिटो अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने जनाइएको छ ।
यो सेवा एनसेलको आधिकारिक फेसबुक मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप र वेबसाइटमा उपलब्ध छ । जसअन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले च्याटबोटमार्फत एनसेलको सेवा लिन, आफ्ना प्रश्न वा गुनासोहरु राख्न सक्छन् ।
च्याटबोट सेवा ‘माया’ माघ ४ गतेदेखि एनसेललका सबै आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल पेज वा ह्यान्डलमा उपलब्ध छन् । यस प्लेटफर्ममार्फत ग्राहकले भ्वाइस तथा डेटा प्याक खरिद गर्न, भिसा तथा मास्टरकार्डबाट रिचार्ज गर्न, एनसेलको सेवा तथा सुविधाको बारेमा कुनै जिज्ञासा राख्न, ब्यालेन्स चेक गर्न, अफरहरुको बारेमा जानकारी लिन तथा कुनै गुनासो भए राख्न सक्छन् ।
एक दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको रुपमा आफ्ना ग्राहकलाई नवीन सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्दै ग्राहक अनुभवलाई अभिवृद्धि गर्न एनसेल सदैव तत्पर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस नवीन डिजिटल सेवाले ग्राहक सेवालाई थप परिस्कृत गर्न मद्दत गर्ने विश्वास एनसेलले लिएको पनि जनाएको छ ।
नयाँ अभियान ‘फास्ट फरवार्ड लाइफ’अन्तर्गत एनसेलले आगामी दिनमा ग्राहकको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै थप नयाँ तथा नवीन सेवाहरु ल्याउँदै जाने जनाएको छ ।
सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्ने बानी छ ? सावधान यस्ता समस्या आउन सक्छन !
मेक्सिकोमा प्रहरी चौकीमै हमला, पाँच थुनुवाको हत्या
सप्तगण्डकी क्याम्पसको सहायक क्याम्पस प्रमुखमा दाहाल